Oromiyaan dhaabbilee albuudaa irraa argachuu kan qabdu woggatti qarshii miliyoona 427 dhabde - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Oromiyaan dhaabbilee albuudaa irraa argachuu kan qabdu woggatti qarshii miliyoona 427 dhabde
Oromiyaan dhaabbilee albuudaa irraa argachuu kan qabdu woggatti qarshii miliyoona 427 dhabde
Biyyattiin kubbaaniyaalee albuudaan saamamutti jirti jedha ob.Gammachu- mataan Waajjira Oodiitii Itoophiyaa
Naannoon Oromiyaa dhaabbilee albuuda baasuu irratti bobba’an irraa woggaa tokko qofa keessatti (bara 2013) qarshii miliyoona 427 argachuun isiirra ture dhabuun isii ibsame. Kana kan ibse Waajjira Oodiitii Itoophiyaa ibsa koree toohannoo paarlaamaaf laate irratti.
Akka ibsa Ob. Gammachuu Dubbisootti, mataa Waajjira Oodiitii Itoophiyaa, waajjirri isaanii dhaabbilee Oromiyaa keessatti hujii albuuda baasuu irratti bobba’an keessaa 65 irratti qorannoo taasisee ture. Kanniin qorannoon irratti geggeeffame keessaa 28 waan tokko naannoo Oromiyaatiif kaffalanii hin beekan. Isaan hafan ammoo waan Oromiyaaf kaffaluun isaan irra jiru yeroodhaan kan hin kaffalle ta’uu dubbate Ob.Gammachu.
Dhaabbileen heddu albuuda omishuudhaaf hayyama fudhatanii kan socho’an ta’us woggatti hangam akka omishan, kan isaan gabaasaniin alatti, waajjirri Ministera Albuudaa fi Anniisaa Itoophiyaa waan beeku tokko hin qabu. ‘Biyyattiin saamamutti jirti. Kan fayyadamaa jiran kubbaaniyoota albuuda omishuu irratti bobba’an qofa,’ jedhe Ob.Gammachu.
Dhaabbilee fi namoonni angawoota mootummaa fi paartii biyyattii ganna 25’f bulchaa jiruun wolitti hidhata qaban kallattii hundaan saamicha biyyattii fi ummata irratti geggeessaa kan turan ta’uu yeroo addaddaatti paartileen mormitootaan dubbatamaa ture. Kan hedduu nama gaddisiisu dhimmuma amma mootummaan amanee fudhate kana dubbachuu isaaniitiif mormitoonni hidhamaa fi doorsisamaati kan turan.
Mootummaan rakkoon saamichaa jiraachuu qofa osoo hin taane hedduu bal’aa ta’uu isaa amanuun waan tokko. Wanti murteessaan, garuu, saamicha daangaan maletti biyyattii irratti geggeeffamaa jiru dhaabsisuu, fi kanniin saamanii fi saamsisan seeratti dhiyeessuudha. Hanna dhaabsisuu fi qabeenya ummataa hatame deebisiisuun murtee fi murannoo siyaasaa guddaa gaafata, garuu.
Previous articleAngawoonni OPDO gurguddoon taayitaa irraa ari’amuuf jedhame
Next articleItoophiyaan labsii Paarlaamaan Awurooppaa baase gufachiisuudhaaf loobii qaxaruuf jedhame
Godina Gujiitti mormiin ummataa cimaan geggeeffamaa jira - Oduu fi Odeeffannoo Oromoof Feb 4, 2016 At 3:26 pm
[…] Oromiyaan dhaabbilee albuudaa irraa argachuu kan qabdu woggatti qarshii miliyoona 427… […]